အိပ်နေရင်ညနိုးနေရင်နေ့ – Pann Satt Lann Books
အားလုံးကို သွားလိုရာသို့ နေ့နေ့ညည မညည်းမညူ လိုက်ပို့ပေးတတ်သောကြောင့် ခေါင်းတွဲအဖြစ် နာမည်တွင်လာသော မောင်လင်းလင်း၊ လစဉ်ရသည့်လခ ပိုလျှံသည့်အပြင် မောင်များကလည်း ထောက်ပံ့သဖြင့် ငွေတိုးပေးစားရင်း အဆင်ပြေနေသူူ အပျိုကြီး မမကြင်၊ သမီးငယ်လေး ပြန်လာပြီး ဖေဖေဟူသော ခေါ်သံကို မကြာခဏ အိပ်မက်မက်တတ်သော ကိုထွေး၊ ယောက်ျားဖြစ်သူကို ချစ်သည်မှလွဲ၍ အိမ်ထောင်မှု လုံးဝနိုင်နင်းခြင်းမရှိသော်လည်း သီချင်းဆိုကောင်း၍ မြန်မာ့အသံတွင် ဓာတ်ပြားရထားသူ ချိုချိုအေး၊ ဘယ်လိုအခက်အခဲကြုံကြုံ စိတ်ညစ်စရာကို ကြာရှည် ထွေးပိုက်မထားတတ်သော ဦးအောင်၊ တစ်ဦးတည်းသောသားလေး၏ မျက်စိရောဂါအတွက် အစိုးရိမ်ကြီးနေရရှာသူ ဂန္ဒီ၊ ဘဝပေးအခြေအနေအရ ဂစ်တာတစ်လက်ဖြင့် ခရစ္စယာန်အိမ်များတွင် ဘုရားပေးသည့်အသံဖြင့် ဘုရားလိုက်ရှိခိုးပေးသူ ဖိုးကျော်၊ ချစ်သူ၏ စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံရချိန်တွင် သမီးငယ်လေးတစ်ယောက်သာ အဖတ်တင်ခဲ့ရသူ အယ်နီတာ၊ ကလေး တစ်ယောက် မွေးတိုင်း တစ်ခါငိုတတ်သူ မညိုစိမ့်၊ ရသည့်လခနှှင့် မလောက်ငသဖြင့် သားအကြီးဆုံးကို ကျောင်းထွက်ခိုင်းရသူ ကိုကံဦး အစရှိသည့် ဇာတ်ကောင်များဖြင့် ရေးဖွဲ့ထားကာ စက္ကုအာရုံ ရာသက်ပန်ဆုံးရှုံးထားရသော လူတစ်စု လယ်ကွင်းသာသာ မြို့သစ်ထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်ရပုံကို ရင်နင့်ဖွယ်ရာ ရေးဖွ့ဲထားသော နုနုရည်အင်းဝ၏ ထင်ရှားသော လက်ရာမွန် ဘဝသရုပ်ဖော်ဝတ္ထုဖြစ်သည်။
အိပ်နေရင်ညနိုးနေရင်နေ့ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု2ရှိပါသည်။
Win Win Htay – September 9, 2020
လောကမှာအသက်ရှင်နေရတာချင်းအတူတူ ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေလို့depressionဝင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့လူကောင်းတွေထက် လောကကြီးကဘာဆိုတာကိုတောင်မသိမမြင်ရတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်မှု၊အချင်းချင်းဖေးမမှု၊သနားစာနာတတ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အမှောင်ဖုံးနေတဲ့လောကလေးကိုသိမြင်ခွင့်ရနိုင်မယ့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်မို့ဖတ်ကြည့်စေချင်လို့ညွှန်းပါတယ်
Ei Mon Khaing – December 19, 2020
ဒီစာအုပ်လေးမဖတ်ခင်က စိတ်ဓာတ်အတော်လေးကျမိပါတယ်၊ ဖတ်ပီးမှ ငါက အဲ့လောက်မဆိုးသေးပါလားလို့ ပြန်သုံးသပ်မိတယ်၊ လူတွေက ရာထူးတစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုတိုးဖို့ ၊ အဝတ်အစားဆိုလည်း ပေါ်သမျှ ရချင်ကြသလို အသစ် အသစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားရာကနေ စိတ်မကျေနပ်မှုတွေ ရနေကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာက အမြင်အာရုံမရှိတဲ့သူတို့အတွက်ကတော့ 1. နေစရာလုံခြုံဖို့နဲ့ စားစရာနပ်မှန်ဖို့ မျှော်လင့်တယ်၊2. ‌ကိုယ့်သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့ မိဘမေတတာရယ်၊3.ပကာသနမရှိတဲ့ ဖေးမကူညီမှုရယ်၊ 4.မျက်မမြင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝခံစားမှုတွေရယ် စတဲ့ ခံစားမှုရသတွေအများကြီးပေးနိုင်တဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ကိုယ့်ဘဝကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေရင် ဒီစာအုပ်လေးကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဘဝတစ်ခုကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင် ရေးသားပေးတဲ့ ဆရာမရဲ့ စာအုပ်တွေကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်ရှင့်။